हेयर स्पा र यसका फाइदा, कसरी गर्ने ? – Chetananews.com
हेयर स्पा र यसका फाइदा, कसरी गर्ने ?
२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:३६ 204 पटक हेरिएको
कपालमा प्रयोग गरिने रसायनयुक्त रङ, धुलो, धुवाँ, माटो, घामले गर्दा कपालको सुन्दरता हराउन थाल्छ । जसले गर्दा कपालको हागाँ फाट्ने, कपालको रेसा मसिनो हँुदै जाने, चाया पर्ने, कपाल टुक्रिर्ने, झर्ने जस्ता समस्या आउने गर्छन्।
सबै मानिसलाई आफ्नो कपाल नरम, मुलायम र चम्किलो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यसैले कपाल सुन्दर बनाउने विभिन्न उपायको खोजी गरिरहन्छन्।
तर, मुलायम बनाउने ध्यानमा आफ्नो कपाल बिग्रिएको थाहै पाउँदैनन् । त्यसैले अहिले धेरैको रोजाइमा ‘हेयर स्पा’ पर्न थालेको छ।
आफूखुसी सबै उपाय अपनाएर चाहेजस्तो नतिजा नआएपछि मानिसको रोजाइमा हेयर स्पा पर्ने गर्छ । हेयर स्पा पार्लर, स्पा सेन्टर र घरमै पनि गर्न सकिन्छ । हेयर स्पा गर्दा पहिला कपालको ‘क्वालिटी’ हेर्नुपर्छ । कसैको चाया हुन्छ, कसैको रेसा पातलिँदै जाने समस्या हुन्छ, कसैको कपाल एकदमै चिल्लो हुन्छ भने कसैको खस्रो।
पार्लरमा हेयर स्पा गर्नुअघि ब्युटिसियनहरुले कहिले नुहाएको, कुन स्याम्फु प्रयोग गरेको, तेल लगाउनु हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्ने गर्छन्।
हेयर स्पा पनि फरक–फरक हुन्छ र कपालको ‘नेचर’ हेरेर गरिन्छ । ब्युटिसियनले कुन खालको ‘ट्रिटमेन्ट’ गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही अनुसार गरिदिन्छन्।
अचेल कोही मान्छे थाहा पाएर हेयर स्पा गर्न आउँछन् भने कोही कहिल्यै हेयर स्पा गरेको छैन, कस्तो हुँदो रहेछ गरिदिनुप¥यो भनेर आउँछन्।
हेयर स्पा किशोर किशोरीदेखि बृद्धबृद्धाले समेत गर्न सक्छन् । हेयर स्पासँगै ‘हेयर ओयल’ पनि गर्न सकिन्छ । हेयर ओयल गर्दा सुक्खा कपालका लागि नरिवलको तेल प्रयोग गर्नु उत्तम मानिन्छ । अलि पाको उमेरका मानिस हेयर स्पाभन्दा हेयर ओयल र ‘हेयर प्याक’ प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । हेयर ओयलिङ, हेयर ट्रिटमेन्ट, हेयर प्याक आदि हेयर स्पाअन्गर्तत पर्ने विविन्न विधि हुन्।
कसरी गर्ने हेयर स्पा ?
सुरुमा कपालमा स्याम्फु लगाएर सफा गरिन्छ । स्याम्फु लगाइसकेपछि ट्रिटमेन्ट क्रिम लगाइन्छ, जसलाई ट्रिटमेन्ट बाथ भनिन्छ । ट्रिटमेन्ट क्रिममा थोरै ‘एमफुल’ मिसाइन्छ । त्यसपछि जरादेखि कपालको टुप्पोसम्म मसाज गरिन्छ । मसाज गरिसकेपछि कपाललाई केही सयम ‘स्टिम’मा राखिन्छ । त्यसपछि पानीले राम्रोसँग पखालेर सुकाइन्छ ।
शैलुन वा पर्लरमा हेयर स्पा गर्दा ४५ मिनेटदेखि १ घन्टासम्म लाग्छ । घरमा गर्दा भने स्याफुपछि क्रिम लगाएर त्यस्तै ५–७ मिनेट राख्दा हुन्छ ।
ब्रान्ड अनुसार ट्रिटमेन्ट क्रिम फरक–फरक हुन्छ । आफ्नो कपालको क्वालिटी हेरेर त्यही अनुसारको क्रिम किनेर घरैमा पनि हेयर स्पा गर्न सकिन्छ । ट्रिटमेन्ट क्रिम अथवा हेयर स्पा भनेर लेखिएका क्रिम किनेर कपाल धुँदा महिनामा एक वा दुई पटक घरमा आफैंले गर्न सकिन्छ ।
हेयर स्पाले कपाल नरम, मुलायम र चम्किलो हुन्छ । कपाल बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । कपाल झर्नेे, कपाल टुक्रर्ने, हाँगा फाटने, नबढ्ने जस्ता समस्या समाधानमा फाइदा पुग्छ ।
हेयर स्पा गर्दा टाउकोको पनि राम्रोसँग मसाज हुने भएकाले टाउको दुखाइ कम हुन्छ भने स्नायु प्रणलीलाई पनि सक्रिय पार्न सहयोग पुग्छ ।
हेयर स्पाले कुनै नकारात्मक असर हुँदैन । तर, कसैको छालामा ट्रिटमेन्ट क्रिम नफाप्ने हुन सक्छ ।
खानपान र जीवनशैलीले पनि कपाललाई असर पारिरहेको हुन्छ । कतिपय मानिस मोटो भइन्छ भनेर चिल्लो पदार्थ खान छोड्छन् तर शरीरले ‘गुड फ् याट’ चाहिरहेको हुन्छ । त्यसैले ड्राइ फ्रुट (बदाम, काजु, पिस्ता आदि) खाइरहनुपर्छ, पानी प्रसस्त मात्रामा पिउनुपर्छ, सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ, यसले कपाललाई पनि फाइदा पुग्छ । बाहिरबाट जति स्याहार गरे पनि हामीले जबसम्म भित्रबाट चाहिने पोषण पाउँदैनौं तबसम्म हामीले चाहे जस्तो नतिजा पाउन सक्दैनौं ।
एक महिनासम्म दैनिक अंगुर
फलफूल–सब्जी कम खानुहुन्छ ?